Melatonin - Pejy fandokoana maimaim-poana ho an'ny ankizy
Aorian'ny fihinanana fety Krismasy sy Taom-baovao dia maro no manandrana mahazo sakafo ara-pahasalamana miverina voafehy. Ary ny ririnina koa dia fotoana ahatsapan'ny maro fa reraky ny rano. Ireto misy torohevitra vitsivitsy hisorohana.
Vitamina amin'ny ririnina - izay ilain'ny vatana ankehitriny ary inona no tsy!
Marina tokoa fa mihabetsaka ny olona mijaly noho ny fahaketrahana na ny fahamaizana ao anatin'ny ririnina. Fa maninona no toy izany? Fa maninona isika no tsy mahatsiaro tena ho salama amin'ny ririnina toy ny amin'ny fahavaratra ary nankaiza ny toe-tsaina tsara?
Izay vitamina amin'ny ririnina - Sary avy amin'i Lorri Lang avy ao amin'ny Pixabay
Mazava ho azy fa mitana andraikitra lehibe ny sakafo, fa ny fanatanjahan-tena, ny rivotra madio, ny tara-masoandro ary ny vitamina dia zava-dehibe ihany koa.
Sun dia mametraka anao amin'ny toe-tsaina tsara!
Mampalahelo fa tsy dia fahita matetika loatra rehefa ririnina ary matetika dia tsy mivoaka mandritra ny herinandro maromaro. Ka tsy mahagaga raha rehefa herinandro vitsivitsy monja amin'ny ririnina dia miparitaka tsikelikely ny toe-tsaina ratsy.
Fa nahoana izany? Satria misy fiantraikany amin'ny haavon'ny melatonin sy serotonin antsika ny tara-pahazavana ny masoandro ary mampiakatra ny haavon'ny hormonina ananantsika. Na dia iharan'ny fahakiviana amin'ny ririnina aza isika matetika, ny lohataona kosa dia toa mampiverina indray ny fiainantsika. "Izay vitamina ilaintsika amin'ny ririnina" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 3. Desambra 2020 9. Desambra 2020 Sokajy fahasalamana sy sakafo mahavelonaKeywords sakafo, sakafo mahasalama, fahasalamana, lasa marary, Melatonin, vitamina C, Vitamine, WinterLeave a Comment amin'ny Inona no vitamina ilaintsika amin'ny ririnina